I-Google Pixel 3a kunye ne-3a XL: Ukucaciswa kokuqala kokuvuza | I-Androidsis
UGoogle uye wahletyelwa iinyanga ukuba asebenze kwindawo yakhe ekumgangatho ophakathi. Ezinye izixhobo eziza kuphehlelelwa ngamagama I-Google Pixel 3a kunye ne-3a XL kwintengiso. Kwezi nyanga sinezinto ezininzi amarhe malunga neefowuni zohlobo lwaseMelika. Nangona kubonakala ngathi ukumiliselwa kwabo kusondele kakhulu kunokuba bekulindelwe.
Ngoku, sifumana ukuvuza okutsha. Ngokunokwenzeka ukuvuza okubaluleke kakhulu kwezi Google Pixel 3a kunye 3a XL. Ukusukela enkosi kuyo sinokwazi ukuba yinxalenye yokubalulwa kwezi smartphones zimbini zenkampani. Ke sinokufumana umbono wokuba silindele ntoni kubo.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo inkampani ngokwayo yaqala Inqaku lokuba ezi zixhobo ziyeza kungekudala. Ayisiyiyo kuphela imveliso uGoogle aza kuhlaziya ngayo uluhlu lwayo kungekudala. Kuba okwangoku, inkampani yaseMelika nayo iyasebenza iwatchwatch yakho, enye imveliso ebesiyiva namarhe amaninzi iinyanga.
Ngeli xesha kungokuDlala kuGoogle ukuba ubukho bezi smartphones zimbini zenkampani buqinisekisiwe. Sinamagama ekhowudi yeefowuni, kule meko "zimnandi" kunye "nesargo." Ukongeza, sele sinayo Ukucaciswa kokuqala kwezi Pixel 3a kunye nePixel 3a XL. Ke sifumana umbono wokuba inkampani yaseMelika isigcinele ntoni kule meko. Yintoni esinokuyilindela kwezi zixhobo?
Ukucaciswa kokuqala kukaGoogle Pixel 3a kunye nePixel 3a XL
Kwiskrini, sinokulindela iphaneli ye-5,6-intshi ye-OLED ngesisombululo se-FullHD, i-1080 × 2160 (i-400 dpi) kwimeko yePixel 3a. Ngelixa imodeli enkulu iza kusebenzisa Iphaneli ye-OLED yobungakanani be-intshi eyi-6, ngesisombululo esipheleleyo se-HD se-1080 × 2220 pixels (440 dpi) kwimeko yakho. Iscreen esikhudlwana kule meko.
Malunga neprosesa siyazi kuphela enye yemodeli encinci, Yintoni e-snapdragon 670. Amanye amarhe acebisa ukuba iPixel 3a XL izakusebenzisa iSnapdragon 710, nangona okwangoku singenaso isiqinisekiso malunga noku. Kubonakala ngathi ezi zixhobo zimbini ziya kufika nge-RAM ye-4 GB. Ukugcinwa okufanayo kuya kusetyenziswa kwiimodeli ezimbini. Nangona sele siyazi ukuba imodeli esisiseko iya kuba ne-64 GB yokugcina. Asazi ukuba kuya kubakho iindlela ezininzi zokugcina.
Kwiikhamera, uGoogle uya kuqhubeka nokusebenzisa inzwa enye, njengoko esenza kwezinye iifowuni. Ikhamera apho usetyenziso lwakho luthembisa ukuba yenye yeenkwenkwezi zefowuni kwakhona. A Ikhamera engasemva eyi-12 MP kunye nekhamera engaphambili eyi-8 MP kwiifowuni zombini. Kule meko, iPixel 3a kunye nePixel 3a XL ngekhe zibenomahluko ngokweekhamera. Kubonakala ngathi umphambili unokuba yinto ebanzi ye-angle sensor. Ubuncinci ngokokuvuza okutsha okufikileyo kuthi.
Malunga nebhetri, Siyazi ukuba imodeli esisiseko iya kuba yi-3.000 mAh, Ukongeza ekubeni nenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza kwe-18 W. Inkxaso esinayo kwimodeli ephezulu. Ngelixa kwimeko yakho umthamo webhetri uyakwahluka. Nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho lwazi lunikiweyo malunga noku. Kwinkqubo yokusebenza, inokuba kungenjalo njani, ezi Google Pixel 3a kunye nePixel 3a XL sele zifikile ngePie ye-Android. Akukho nto yothusayo malunga noku. Kuyaziwa ukuba baya kufika kunye ne-sensor yeminwe engasemva, ukongeza kwi-USB-C.
Koku kuvuza ukuza kuthi ga ngoku, Ezi Pixel 3a kunye nePixel 3a XL zibonwe ngemibala emnyama nemhlophe. Kuthiwa umbala wesithathu uya kufumaneka. Nangona okwangoku kungaziwa ukuba ngowuphi omnye umbala, ukuba ngaba ukho ekugqibeleni. Kwaye asinayo idatha ukuza kuthi ga ngoku kwimihla apho uGoogle acwangcise ukuyazisa kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ukucoca okokuqala iGoogle Pixel 3a kunye ne3a XL